Lalao Hexa aterineto. Play maimaim-poana
Lalao Hexa an-tserasera
Ny tranonkala ny fitiavana
Lalao Online Funny Games Games ho an'ny ankizivavy Games ho an'ny ankizy Puzzle lalao Tetris Manan-tsaina On care Ny Fanabeazana Efijery kasihina Html5 Android
Eo anoloantsika dia vaovao lalao mahafinaritra Hexa - fantatra orinasa miforona vavahadin lalao. Izany dia natao ho an'ireo izay te- hipetraka famahana isan-karazany sy saro-pantarina piozila ary atao ao amin'ny Fanahy amin'ny malaza indrindra eo amin'izao tontolo izao ny tetris lalao. Eo anoloantsika dia ny mitendry saha feno sela. Down ny rafitra teo anoloan'ny amintsika dia mipoitra ny sarin- isan-karazany ny endriny sy ny samy hafa amin'ny samy hafa ny lokony. Ny andraikitrareo dia ny hisintona azy ireo tao amin'ny saha milalao sy ny toerana ao amin'ny filaharana marina. Rehefa mitovy ny loko sy ny habetsaky ny zavatra ilaina, dia hanjavona avy amin'ny varavarana lamba, ary ianao dia homena hevitra. Fotoana eo amin'ny asa dia tsy voafetra, fa tsarovy fa isaky ny ambaratonga ny fahasarotana dia hitombo ihany. Mifehy ny lalao mampiasa ny totozy na fiara mikasika fanondrony amin'ny efijery. Hexa lalao manasongadina somary mamiratra sy avo - kalitao sary, ary koa ny tsara napetraky ny amin'ny arahina mozika. Matoky isika fa tsy ho azon'ny maro mpilalao amin'ny sokajin-taona rehetra. Download haingana Hexa touchscreen fampiharana amin'ny finday na ny tablette, ary mitsoraka ao amin'ny mahafinaritra sy mahavariana izao tontolo izao ny piozila. Raha te- hifaninana ho amin'ny lohatenin'ny tsara indrindra mpilalao amin'ny lalao Hexa, ny milalao interenete. Dia mila misoratra anarana amin'ny aterineto sy anjara amin'ny ady amin'ny mpilalao mahafinaritra avy amin'ny manodidina an'izao tontolo izao